Shirka Soomaaliya oo saaka furmaya - BBC Somali - Warar
Shirka Soomaaliya oo saaka furmaya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Mey, 2013, 04:35 GMT 07:35 SGA
Shirka waxaa wada guddoomin doona Madaxweynaha Soomaaliya iyo Raiisul Wasaaraha Britain
Wufuud ka kala socota in ka badan konton dal iyo hey'ado caalami ah ayaa ka qeybgalaya shirka caalamiga ah ee Soomaaliya ee London. Shirka ayaa waxa wada guddoominaya Raiisul Wasaaraha Britain, David Cameron iyo Madaxweyne Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Mr Cameron ayaa sheegay inuu rajeynayo in shirkan uu isku raaci doono qorshe dheer oo dhinaca ammaanka ah oo Soomaaliya loo sameeyo iyo weliba in la horumariyo sida la xisaabtanka iyo halka ay ku baxaan qarashaadka.
Waa shirkii labaad ee ay martigeliso dowladda Britain, tan iyo shirkii koowaad oo dhacay bishii Febraayo ee sanadkii hore Soomaaliya wax badan ayaa iska beddelay xaaladeeda.
KMG ayaa aga baxay doorasho ayaa la qabtay, Madaxweyne ayaa dalka gudihiisa lagu doortay markii ugu horreysay muddo labaatan sano.
Kooxda Islaamiga ee al-Shabaab waa laga saaray magaalooyinka waaweyn, militeri ahaanna waa la wiiqay.
Dowladda Soomaaliya waxay heleysay aqoonsi caalami ah, iyadoo Mareykanka iyo dalal kale ay aqoonsadeen. dalal badan ayaa safaaradihii dib uga furtay Muqdisho oo ay ku jirto Britain.
Britain waxay sanadkii hore qabatay shir caalami ah oo ku saabsan Soomaaliya.
Weeraradii burcad badeedka Soomaaliya ayaa hoos u dhacay sanadkii hore.
Shirka ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii lagu taageeri lahaa dowladda Soomaaliya, si ay wax uga qabato arrimo dhawr ah.
Qoddobadaasi waxaa ka mid ah ammaanka iyo sidii dib loogu dhisi lahaa ciidanka hubeysan iyo booliiska Soomaaliya, dib u habeynta garsoorka iyo cadaaladda iyo maamulka nidaamka dhaqaalaha bulshada, iyadoo dowladda Soomaaliya laga sugayaa inay soo bandhigto qorshe dhamaystiran oo ku saabsan dhinacyada u baahan in laga taageero.
Shirkan ayaa waxa uu kaga duwan yahay kii hore ee London oo ay ka soo qeybgaleen dhamaan dhinacyada Soomaaliya, in kani ay hadda ku gacanseyreen inay ka soo qeybgalaan Somaliland iyo Puntland oo wafdi gaar ahi ka socon.
Ka sokoow in dhinacyadaasi muhiimka ah ka maqan yihiin dowladda Soomaaliya waxa horyaal caqabado waaweyn oo ammaanka ayaa ah arrinta ugu weyn, taasi oo tusaale tahay weeraradii qaraxyada ahaa ee ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho, iyadoo alShabaab ay awooddo inay weeraro ka fuliso magaalada Muqdisho, iyo in maamulka la fidiyo oo la gaarsiiyo gobolada.
Si kastaba ha ahaatee shirka ayaa waxa laga filayaa in war murtiyeed laga soo saaro dhammaakiisa oo muujin doona in beesha caalamka ay taageero u heyso dowladda Soomaaliya iyo in la sii kordhiyo dadaalka lagu taageerayo dowladda Soomaaliya oo hadda ku tiirsan ammaan ahaan ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.